बाल्यकाल यसरी उड्थ्यो कि उड्थ्यो मेरो कल्पना—धर्तीमा किन खस्नु पर्‍यो हँ यो झरी?निथ्रुक्कै भिजाएर किन चुम्नु पर्‍यो?
— मेरो कलिलो गालाहावामाथि तैरिंदै तैरिंदैसागरसम्म पुग्ने बाटो हिँडे के बिग्रन्थ्यो यो झरीको?आकाशमा चराझैं उडिदिएहुन्थ्यो नि यो डुम्रे खोलो पनि? आखिर किन छेक्छ हँ यसले सधैंमेरो मामाघर जाने बाटो । के यिनीहरूको चाहिँ मामाघर हुँदैन?
बुइँगलका प्रत्येक घैंटाभित्रएक–एक वटा स्वर्ग लुकेको हुन्थ्योजतिबेला म पुतलीझैं फूलको पछिपछि दौडन्थेँ
— कपासझैं हावा–हावा उडिहिड्थेंँघैंटोको स्वर्गमा पस्दै गर्दा—यस्तो लाग्थ्यो कि मेरी आमाले जाँतो घुमाउँदा मात्रघुम्दो हो पृथ्वी ।
दर्शन ढुङ्गोको झिल्को देख्दा लाग्थ्यो—उस्तै उस्तै हुँदो होहामीले खेल्ने गट्टार ईश्वरको चम्किलो आँखा ।
यस्तो पनि लाग्थ्यो कि मैले खल्र्याङ्खुट्टी खेल्ने मैदानआफ्नै छातीमा मुटुझैं टाँस्न पाएकस्तो हुँदो हो ?
मानिसले पाइला चाल्न सुरु मात्र गर्नु परोस्आफैं हिँडून् बाटाहरूर पुर्‍याऊन् गन्तव्यसम्म लाग्थ्यो ।
सोच्थें— भैंसे खोलाको लेउमुनिढुङ्गा, बालुवा र झिक्राले बारेरकिन बनाउँदैनन् ?मान्छेले जस्तो सुरक्षित घरमाछा, गँगटा र चेपागाँडाहरू ?
विशाल गङ्गा नदी समेट्न सक्ने महादेवले किन समेट्दैन—सम्पूर्ण मानव जातिको आँसुआफ्नो जटामा?र, लाग्थ्यो—प्रार्थना गरेर होइन भगीरथले झैंकि आफ्नै पसिनाका बीउहरू छरेरआँसुका यावत् झरनाहरू समेट्नेआधुनिक महादेवको जटाकिन नउमारुँ म आफ्नै बारीमा?
बालक जो थिएँकल्पनाको गल्ली–गल्ली चहार्दैहिँड्न मात्र सक्थें।
शनिबार, पौष ९, २०७३ १२:५१:४२